काठमाडौँ यस्तो विद्यालय भेटियो जहाँ १३ विधार्थीहरु र १४ जना शिक्षक::kamananews
काठमाडौँ यस्तो विद्यालय भेटियो जहाँ १३ विधार्थीहरु र १४ जना शिक्षक
काठमाडौँ । सरकारले शिक्षक विद्यार्थी अनुपात मिलाउने भन्दै २०६८ सालदेखि नै योजना बनाएर काम सुरु गर्यो । शिक्षा मन्त्रालयले बनाएको शिक्षा नियमावलीअनुसार हिमालमा प्रतिकक्षा ३० जना, पहाडमा प्रतिकक्षा ४० जना र तराई तथा उपत्यकामा प्रतिकक्षा ५० जना विद्यार्थी हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
तर उपत्यकामै कैयौँ यस्ता सरकारी विद्यालयहरू छन्, जहाँ शिक्षक विद्यार्थी अनुपात हेर्ने हो भने कतिपय विद्यालयमा विद्यार्थीभन्दा शिक्षक बढी भेटिन्छन् ।
काठमाडौं महानगरपालिका अन्तर्गत वडा नम्बर २४ तारिनीबहालमा छ, तारिणी आधारभूत विद्यालय । कक्षा ५ सम्म पढाई हुने यो विद्यालयमा विद्यार्थी भने जम्मा ४ जना मात्रै छन् । तर उनीहरू पनि सँधै विद्यालय आउने भने होइनन् ।
बिहीबार अपरान्ह २ बजे हामी तारिणीबहालको तारिनी आधारभूत विद्यालयमा पुग्यौँ । विद्यालयमा एकजना विद्यार्थी पनि थिएनन् । ३ जना शिक्षिका र १ जना कर्मचारी भने विद्यालयको छतमा घाम तापेर बसिरहेका थिए ।
‘विद्यार्थी छैनन् ?’ हाम्रो प्रश्नमा विद्यालयकी प्रधानअध्यापिका सीता घिमिरेले भनिन्, ‘विद्यार्थी बिदा लिएर बसेका छन् ।’
कति विद्यार्थी छन् र ?
नियमित आउने ४ जना थिए, उनीहरू पनि बिदा लिएर बसेका छन् ।
खासमा यो विद्यालयमा भर्ना हुन १४ जना विद्यार्थी आएका रहेछन् । १४ जनामध्ये १० जना विद्यार्थी मधेसी मुलका थिए, जो दैनिक मजदुरी गर्छन् । उनीहरू नियमित विद्यालय आउन पनि सक्दैनन् । बाँकी रहेका ४ जना विद्यार्थी भने नियमित आउने गरेका रहेछन् र त्यही ४ जना विद्यार्थीलाई पठाउन ३ जना शिक्षिका र एक जना कार्यालय सहयोगी विद्यालयमा थिए ।
विद्यार्थीहरू बिदा लिएर गए पनि शिक्षिकाहरू भने विद्यालयमा हाजिर गरेर फर्कने गरेका छन् ।
महानगरको २४ नम्बर वडाकै अर्को विद्यालय केशचन्द्र विद्यालयको हालत पनि उस्तै छ । यस विद्यालयमा त अझ ३ जना विद्यार्थी छन् भने ४ जना शिक्षकको दरबन्दी छ । इटुम्बहालमा रहेको यस विद्यालयमा १२ जना विद्यार्थी भर्ना भए पनि जम्मा ३ जना विद्यार्थी मात्रै नियमित आउने गरेका छन् ।
हामी बिहीबार अपरान्ह साढे २ बजे यस विद्यालयमा पुग्दा विद्यालय बन्द थियो । न यहाँ विद्यार्थी थिए, न त शिक्षक शिक्षिका नै । विद्यार्थी नभएकै कारण होला, विद्यालयमा ताला झुण्डिएको थियो ।
यी दुई विद्यालयबाट १ मिनेटकै पैदल दूरीमा दुईवटा विद्यालय छन्, शान्ति विद्यागृह र कन्या स्कुल । यी दुई विद्यालयमा प्रशस्तै विद्यार्थी पनि छन् । तर ५ वर्षदेखि विद्यार्थी नहुँदा पनि पनि यी विद्यालय भने अझै मर्ज हुन सकेका छैनन् । पहाड र तराईका कतिपय जिल्लामा एउटै कक्षामा ७० जनासम्म राखेर पढाउनुपरेको छ, तर काठमाडौँमै विद्यार्थीभन्दा शिक्षकको सङ्ख्या बढी हुँदा पनि न शिक्षकको व्यवस्थापन भएको छ न त विद्यालय मर्ज नै भएका छन् ।
यसै विषयमा जिल्ला शिक्षा कार्यालय काठमाडौँका स्रोत व्यक्ति रुद्र कार्कीलाई सोध्दा उनले विद्यालय मर्ज गर्न प्रतिवेदन बुझाएको बताए । आफूले पटक पटक विद्यालय मर्ज गर्न महानगरपालिका र जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाए पनि मर्ज नभएको बताए । बरु शिक्षकको व्यवस्थापनको काम भइरहेको भन्दै ती शिक्षकलाई अर्को विद्यालयमा पठाउने तयारी भइरहेको बताए ।
शुक्र, फाल्गुन ११, २०७४ मा प्रकाशित
सप्तरीका सामुदायिक विद्यालयमा हुदैन पुरा दिन पढाइ टिफिन टाइमपछि सँधै छुट्टी
२ चैत, सप्तरी । १ चैतको मध्यान्ह १२ः३० बजे । यो समयमा विद्यालयका हरेक कक्षाकोठामा पढाई भइरहेको हुनुपर्ने हो । तर, विष्णुपुर गाउँपालिका १ जमुनी मधेसपुराको जनता प्राविमा एक जना शिक्षिका र एक जना कार्यालय...
शैक्षिक संस्था सधैं आन्दोलनको तारो
काठमाडौं : राजनीतिक माग पूरा गराउन सरकारलाई दबाब दिन शैक्षिक संस्थालाई तारो बनाउने क्रम बढ्दो छ। यो शृंखला आइतबार पनि दोहोरियो।आफ्ना कार्यकर्तालाई राज्यले पक्राउ गरेर थुनामा राखेको रिस पोख्न नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा माओवादीनिकट विद्यार्थी...
राजविराज क्याम्पसमा अनिश्चितकालीन तालाबन्दी – कारण यस्तो
राजविराज, १३ फागुन । महेन्द्र विन्देश्वरी बहुमुखी क्याम्पस राजविराजलाई नवस्थापित राजर्षि जनक विश्वविद्यालयमा गाभ्ने सरकारी निर्णायको विरोध गर्दै आजदेखि अनिश्चित तालाबन्दी गरिएको छ । नेपाल प्राध्यापक संघ क्याम्पस एकाइ राजविराजको नेतृत्वमा क्याम्पसका प्राध्यापक, शिक्षक तथा...
एजेन्सी : अनुहारलाई गोरो बनाउनको लागि मानिसहरु धेरै थरि कस्मेटिक सामानहरु प्रयोग गर्ने गर्छौ । तर लामो समयसम्म यस्ता सामानहरु प्रयोग गर्दा हाम्रो स्किन ड्यामेज हुन सक्छ । यसका साथै यसले छालामा क्यान्सर हुने...
पढ्दा पढ्दै बेहोस हुन थालेपछि विद्यालय एकाएक भयो बन्द, खास भित्री घटना यस्तो छ
विद्यार्थीहरु कक्षा कोठामा पढ्दा पढ्दै बेहोस हुन थालेपछि यहाँको एक विद्यालय बन्द गरिएको छ । जिल्लाको नलगाड नगरपालिका( ८ स्थित पंञ्चभयार माध्यामिक विद्यालय जिकुवामा दैनिक ४ भन्दा बढी विद्यार्थीहरु पढ्दा(पढ्दै बिरामी हुन थालेपछि दुई...
कक्षा १० को एसइई परीक्षाकाे तयारीमा बसेका बिद्यार्थीका लागि आयो खुसीकाे खबर, १० कक्षाको परिक्षामा भयो एकाएक नियम परिवर्तन
काठमाडौं- सरकारले अर्को वर्षदेखि माध्यामिक विद्यालय परीक्षा (एसइई) प्रदेशस्तरमा गर्ने तयारी गरेको छ । विसं २०७५ देखि सात वटै प्रदेशका प्रदेश परीक्षा बोर्डको कार्यालयबाट एसइई सञ्चालन गर्ने तयारी भएको शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा हरिप्रसाद लम्सालले...
साथी बचाउन एकै दिन ५० हजारको चिया बेचे विद्यार्थीलाई शेयर गरौ !!
दोलखा, माघ १८ । ब्लड क्यान्सरबाट पीडित आफ्नो साथीलाई बचाउन चरिकोटस्थित गौरीशंकर बोर्डिङ स्कुलका विद्यार्थीहरुले सदरमुकाम चरिकोटको सातदोबाटोमा एकै दिन रु. ५० हजारको चिया विक्री गरेका छन् । ब्लड क्यान्सबाट ग्रसित सदरमुकाम चरिकोटस्थित कालिन्चोक माविमा...
नेपाली विद्यार्थीलाई अमेरिकाबाट फर्काइयो, पढाई अलपत्र हुने !
अमेरीकाबाट एक नेपाली बिद्यार्थीलाई फर्काइदिएको छ । जनवरी महिनाको पहिलो साता सान्फ्रानसिस्को अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट सुरक्षा जाँचले नेपाल फर्काइदिएको हो ।रमेश थापा (नाम परिर्बतन)लाई तीन वर्ष अमेरिका बसेका उनी नेपाल आएर फर्कने क्रममा अध्यागमनले सोधपुछ...